Archive du 20181121
Marc Ravalomanana Manangana firenena demokratika miaraka amin’ny vahoaka
Tsy misy hahita tombontsoa amin’ny korontana. Nisy ireo tsy fahatomombanana tamin’ny lisi-pifidianana sy ny fifidianana tamin’ny ankapobeny, ary izany no mahatonga ny fitarainana sy fitoriana maro tonga eny amin’ny HCC.
Very 10 taona i Madagasikara raha tarafina amin’ny tantara sy ny zavatra niainan’ny firenena nanomboka ny faramparan’ny taona 2008 nikotrehana fanonganam-panjakana. Ny fihodinana faharoa amin’izao fifidianana filoha ankehitriny izao dia tandindon’ny « ni…ni… »
Jean Max Rakotomamonjy Mila ny minisitry ny vola eny Tsimbazaza anio
Andrasana ny fandalovan’ny minisitra misahana ny vola sy ny tetibola, Vonintsalama Andriambololona eo anivon’ny Antenimieram-pirenena.
Anisan'ny voasokajy ho ambany ny taham-pahavitrihana tamin'ity fifidianana ity,
Ravalomanana sy ny ekipany Nametraka fitoriana 150 isa
Tonga nametraka ny fitoriana samihafa mifandraika amin’ny fifidianana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny “Legal team” na ireo vondrona mpahay lalàna akaiky ny kandida laharana-25 Marc Ravalomanana omaly.
Korontana eto amin’ ny firenena Tsy ampy ny fandraisana andraikitra…
Maro ireo olana nifanesy teto amin’ny firenena no nahatonga ny tsy fahamarinan-toerana teo amin’ny lafiny politika.
Andry Rajoelina Azo hahintsana tsy ho kandida
Mason-tsivana azo hanintsanana kandida ny fanambarana ampahibemaso mivoy sy manakiana na manaratsy ny asan’ny rafi-panjakana na rafi-pitsarana miantsoroka ny fifidianana ary ny endrika fanerena azy amin’ny asany mialoha ny hamoahany ny vokatra,
Fitoriana eny amin’ny HCC “Misy fetrany ihany”, hoy i Emile Ratefinanahary
Sesilany ireo fanambarana maneho ny tsy fahatomombanana tamin’ny fiatrehana ny fihodinana voalohany.
Fifidianana filoha Miantso fitoniana sy filaminana ny SADC
Nankasitraka ny famoahan’ny CENI ny voka-pifidianana vonjimaika ny 17 novambra teo ny SADC araka ny fanambarana nalefan’ity vondrona ity tamin’ny alalan’ny Sekretera mpanatanteraka Dr. Stergomena Lawrence Tax,
Fifidianana eto Madagasikara Azo hatsaraina tsara, hoy ny teknisianina
Ho vahinin’ny fandaharana Teknisianina vokarin’ny onjam-peo Top Radio 102.8FM amin’ny 7 ora sy sasany Atoa Tahina Razafinjoelina, manampahaizana manokana eo amin’ny sehatry ny informatika.
Fanemorana sy fanafoanana fifidianana Tena famerezan-jo, hoy ny antoko ABA
Ankoatra ny fisaorany ny vahoaka malagasy izay nahefa ny adidiny sy ny fitondram-panjakana namela ny fanatontosana ny fihodinana voalohan’ny fifidianana ho filoham-pirenena dia nisaotra ihany koa ny avy eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na
Depiote Horace sy ny TIM Boriborintany faha-6 Nanentana ny mpifidy hiomana amin’ny fihodinana faha-2
Raikitra ny fiomanana amin’ny fiatrehana ny fifidianana fihodinana faharoa ho an’ny antoko TIM ao amin’ny Boriborintany faha-6 eo amin’ny fanohanana ny Kandida n°25, Marc Ravalomanana, ho filoha hitondra indray ny firenena Malagasy hanomboka amin’ny 19 desambra 2018 izao.
Orinasa Easy park Miandrandra fanitarana asa amin’ny CUA
Hankalaza ny faha 3 taona niarahany niasa tamin’ny kaominina Antananarivo atsy ho atsy ny orinasa mpitantana fiantsonam-piara Easy park.
Ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro Hifanampy ny Meteo sy ny ONE
Tsy honohono intsony fa efa miaina tanteraka ao anatin’ny fiovaovan’ny toetr’andro isika eto Madagasikara ankehitriny. Mitombo ny fisehon’ny oram-be, mihamahazo vahana ny hain-tany, tara ny firotsaky ny orana amin’ny faritry ny afovoan-tany.
Fambolena an-drenivohitra Nomen’ny kaominina fiofanana ireo tompon’andraikitry ny EPP miisa fito
Nomen’ny kaominina Antananarivo Renivohitra fiofanana momba ilay tetikasa fambolena an-drenivohitra avokoa ireo tompon’andraikitry ny EPP miisa fito eto an-tanàn-dehibe omaly.
Zava-dehibe ny hira ho an’ny olona manao kanto sy mamorona azy ary ahafahana mampita hafatra haingana be. Misy aza moa milaza mihitsy fa ny hira iray dia mitovy amin’ny tonom-bavaka 2 atao.
Basket Africa Women’s Champions Cup 2018 Miditra amin’ny andro faha-5 amin’ny fifanintsanana anio
Raha mandresy an’i Lakers Zimbabwe anio alarobia 21 novambra 2018 ny Mb2All Madagasikara eo amin’ny andro faha-5 amin’ny fifaninana fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ireo ekipa
Misoko mangina ny teti-dratsy…
Miandry am-pitoniana izay ho voka-pifidianana havoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana no ady eo amin’izao. Efa ireny niaraha-nahita ireny sahady anefa ny karazana don-tandroka sy toa fandrangarangana hery ataon’ny sasany.
Fampiroboroboana ny sehatra Indostria Miankina amin’izay filoham-pirenena ho lany eo
Omaly talata 20 novambra no natao tetsy amin’ny Carlton Anosy ny latabatra boribory ho fankalazana ny Indostria eto Afrika izay nanasana mpandraharaha maro sy ireo sehatra tsy miankina.
Indostria Malagasy Misedra olana amin’ny fidiran’ireo vokatra vahiny
Na dia miezaka manandratra ny vokatra tena Malagasy aza ireo indostria misy eto amintsika dia misedra olana goavana ihany izy ireny.
Vokatra Lodsia tamin’ity taona ity Tsy tsara, hoy ny depiote Famindra
Nisokatra ny alatsinainy teo, indrindra ho an’ny faritra Antsinanana, ny taom-piotazana Lodsia, hoy ny solombavambahoaka lany tao Toamasina, Justin Famindra.
Orinasa Socolait Miezaka manome lanja ny vokatra tena Malagasy
Miezaka manome lanja hatrany ny vokatra tena malagasy ny orinasa Socolait. Tsy manafatra akora avy any ivelany intsony izy ireo ankehitriny fa miaina amin’ireo ronono vokariny eto an-toerana toy ny ao Antsirabe.
Talenta vaon’ny mozika malagasy Ho fantatra anio izay tompondaka
9 taona izao no nisian’ny fifaninanan-kira « Graine de star » izay karakarain’ny toeram-pandihizana Le taxibe erak’i Madagasikara.
NIDOBOKA AM-PONJA I TATANDRAZA
Nidoboka am-ponja vonjimaika ao Ambovombe i Marc Tatandraza, nanaraka ny didy NR 053-C/D izay nivoaka tamin’ny 12 martsa 2018, izany hoe sivy volana talohan’ny nisamborana azy.
Zoma Center etsy Analakely Hanampy ny rehetra amin’ny fiatrehana ny fety
Miomana sahady amin’ny fiatrehana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona ny tranombarotra « zoma center” » etsy am-pitan' ny Epp Analakely.
Taom-piotazana lodsia 2018-2019 20 000 taonina no ezahina haondrana
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tany Toamasina omaly tamin’ny 6 ora hariva ny taom-piotazana lodsia taona 2018-2019. Efa tonga ao amin’ny seranan-tsambo ao ireo sambo hanondrana ny vokatra voalohany alefa any Eoropa.